Myanma Port Authority |
Welcome to Myanma Port Authority
MV.Express Argentina ကုန်သေတ္တာတင်သင်္ဘောကြီး Maiden Voyage အဖြစ် စတင်ဝင်ရောက်လာခြင်း
Sealand Maersk ၏ MV. Express Argentina ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘောကြီး MITT ဆိပ်ကမ်းသို့ Maiden Voyage အဖြစ် စတင်ဝင်ရောက်လာခြင်း
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ Vung Tau ဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာလာသည့် LOA 223m, DWT 4,4060 ရှိ MV. Express Argentina ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘောကြီးသည် ၁၂-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် MITT ဆိပ်ကမ်းတံတားသို့ ရေစူး 8.1 m ဖြင့် ဝင်ရောက်ဆိုက်ကပ်လာခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သင်္ဘောကြီးသည် ကုန်သေတ္တာ ၂၉၀၀ TEU ကို ပြန်လည်တင်ဆောင်ပြီး ၁၃-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် တရုတ်နိုင်ငံ ရှန်ဟိုင်းဆိပ်ကမ်းသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီးဖြစ်ပါသည်။
By it_assistant0Comments Read more...
Down Time အဖြစ် ကြေငြာခြင်း
Port EDI Operation လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသော UPS (၁) လုံးသည် နှစ်ကာလ ကြာမြင့်ပြီး ချို့ယွင်းလာပါ၍ အသစ်လဲလှယ် တပ်ဆင်ခြင်း၊ Power Source များ စစ်ဆေးပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် Port EDI စနစ်တွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသော User များအတွက် အောက်ပါကာလအတွင်း Down Time အဖြစ် ကြေငြာသတ်မှတ်လိုက်သည်-
နေ့ရက်/အချိန် - ၁၆-၁၂-၂၀၂၁ (ကြာသပတေးနေ့) နံနက် (၀၇:၀၀) မှ
- ၁၇-၁၂-၂၀၂၁ (သောကြာနေ့) နံနက် (၀၇:၀၀) ထိ
ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ တာဆီးကာကွယ် ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် လိုက်နာကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အစီအမံများ
မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်နှင့် ဆိပ်ကမ်းတံတားများမှ ပိတ်ရက်မရှိ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိခြင်း
ယခုအခါမှာ နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသနိုင်စေရန်အတွက် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက် များကို သတ်မှတ်ကြေညာပေးခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှုများ မရပ်တန့်စေရန်နှင့် ပြည်ပမှ ပင်လယ်ရေကြောင်းဖြင့် တင်သွင်းလာသည့် ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်း များ မိဘပြည်သူများ လက်ဝယ်သို့ အမြန်ဆုံးရောက်ရှိစေရေးအတွက် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်နှင့် ဆိပ်ကမ်းတံတားအသီးသီးတို့သည် ပိတ်ရက်မရှိ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းများ ဆိပ်ကမ်းမှ ထုတ်ယူနိုင်ရေးအတွက် ပိတ်ရက်မရှိ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း
“အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းများ ဆိပ်ကမ်းမှ ထုတ်ယူနိုင်ရေးအတွက် ပိတ်ရက်မရှိ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း”
နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရော ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသနိုင်ရေးအတွက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့မှစ ၈ ရက်နေ့အထိအား တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်အဖြစ် ကြေညာပေးခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှုများ မရပ်တန့်စေရေးနှင့် ပြည်ပမှ ပင်လယ်ရေ ကြောင်းဖြင့် တင်သွင်းလာသည့် ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ မိဘပြည်သူများ လက်ဝယ်သို့ အမြန်ဆုံး ရောက်ရှိ စေရေးအတွက် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်နှင့် ဆိပ်ကမ်းတံတား အသီးသီးသည် ပိတ်ရက်မရှိ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံ အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းဌာနသည်၊ ပြည်ပမှ ပင်လယ်ရေကြောင်းဖြင့် တင်သွင်းလာသည့် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်များ မိဘပြည်သူများလက်ဝယ်သို့ အမြန်ဆုံးရောက်ရှိစေရေးအတွက် AWPT/HPT, MIPနှင့် MITT ဆိပ်ကမ်းတံတားအသီးသီးသို့ ၂၆-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိရောက်ရှိပြီးဖြစ်သော ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်း ကုန်သေတ္တာများကို အမြန်ဆုံး/ချက်ခြင်းထုတ်ပေးသွားနိုင်ရန် လိုအပ်သည်များကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများအား ဆိပ်ကမ်းတံတားများမှ အမြန်ဆုံးထုတ်ပေးလျက်ရှိခြင်း
"ပင်လယ်ရေကြောင်းမှတစ်ဆင့် ကုန်သေတ္တာဖြင့်တင်သွင်းလာသည့်ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများအား ဆိပ်ကမ်းတံတားများမှ အမြန်ဆုံးထုတ်ပေးလျက်ရှိခြင်း"
အောက်ဆီဂျင်အိုးများ လက်ရှိ ဖြန့်ဖြူးနေမှု အခြေအနေ
မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန၊ သိမ်ဖြူသင်္ဘောကျင်းရှိ အောက်ဆီဂျင်စက်ရုံ အနေဖြင့် (၆-၇-၂၀၂၁) ရက်နေ့မှ (၁၀-၇-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ (၂၄) နာရီ ပြန်လည် လည်ပတ်ပြီး အများပြည်သူသို့ စက်ရုံမှ ထွက်ရှိသမျှသော အောက်ဆီဂျင်များကို ကြိုးစားဖြန့်ဖြူးပေးခဲ့ပါသည်။
(၁၁-၇-၂၀၂၁) ရက်နေ့မှစ၍ အရေးပေါ်လူနာများကို အထူးကြပ်မတ်ကုသမှုများ ပေးနေကြသည့် Covid စင်တာများဖြစ်သော အင်းယားစင်တာ၊ ရိုးမစင်တာနှင့် ရန်ကုန် အရှေ့ပိုင်းဆေးရုံကြီးတို့သို့ အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်များအရ စက်ရုံမှ ထွက်ရှိသမျှကို ဖြည့်တင်းပေးနေရပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
Tidal Information :
Berthing List :
Container Vessel Scheduled for January 2022
Port Electronic Data Interchange System
21/01/2022 12:39 0.61 05:15 6.20 00:00 0.00 17:41 5.87
20/01/2022 12:05 0.65 04:41 6.22 23:54 1.02 17:07 5.80
19/01/2022 11:31 0.68 04:10 6.15 23:16 1.00 16:38 5.71